Kuvhiringidzika pamusoro pezvitupa zvekudzivirira zvinodzivirira kufamba kupora
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Kuvhiringidzika pamusoro pezvitupa zvekudzivirira zvinodzivirira kufamba kupora
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuvhiringidzika pamusoro pezvitupa zvekudzivirira zvinogona kutadzisa kufamba kupora
Kushaikwa kwemarekodhi edhijitari mune dzimwe nyika, kusanganisira iyo US, kunoita kuti chiratidziro chinzvimbo chinoshanda.
Majekiseni akarumbidzwa semugadziri wekufambisa uye kupenya kwetariro kune iyo indasitiri.
Mitemo yakapatsanurwa uye kushomeka kwezvibvumirano zvinowirirana kufamba.
Vafambi vakasiyiwa vakavhiringidzika pamusoro pekuti vangape sei chinzvimbo chavo chekubaiwa.
Kushaikwa kwepasi rose kunozivikanwa chirongwa chekudzivirira chirwere kunogona kukanganisa kufamba kwekufamba sezvo vafambi vazhinji vakasiyiwa vakavhiringidzika nezvezvinodiwa zvekuisa kwega uye zvirambidzo zvekufamba. Nemitemo yakasiyana-siyana, vamwe vanogona kusarudza nzendo dzekumba, vachirova nzvimbo dzinoenderana nekushanyirwa kwenyika dzese.
Majekiseni akarumbidzwa semugadziri wekufambisa uye kupenya kwetariro kune iyo indasitiri. Nekudaro, mitemo yakapatsanuka uye kushomeka kwezvibvumirano zvinowirirana zvinoramba kudzora kufamba, pamwe nekurambidzwa kwekufamba kuri kwechipiri kunodzivisa kufamba kwe55% yevakabvunzwa musarudzo dzichangobva kuitika dzeindasitiri.
Vafambi vakasiyiwa vakavhiringidzika pamusoro pekuti vangape sei chinzvimbo chavo chekudzivirira nemitemo yakasiyana siyana kunzvimbo dzavanosvika. Kune dzimwe nzvimbo, vafambi vanofanirwa kusvetuka nepakati hoops kuti varatidze chimiro chavo, uye kana vachifamba kuenda kune dzakawanda nyika, maitiro acho anowanzosiyana. Kunyangwe ichiita sekunge zvirambidzo zvadzora, kuoma kwekuratidza kuti kubaiwa nhomba kucharamba kuri chipingamupinyi.
Nyika dzakasiyana dzinoraira mitezo yakasiyana kuratidza humbowo hwekubaiwa, kubva pabepa kuenda kumadhijitari zvinyorwa. Dhijitari zvinyorwa hazvisi nyore kuwana mune mamwe marudzi, uye zvinowedzera rukoko rwekuoma kwevafambi, izvo zvinogona kuita kuti vafungisise zvirongwa zvavo.
Humbowo hwekubaiwa hutachiona hunoratidzika kunge hwunofungidzirwa kubviswa kwejekiseni. Kushaikwa kwemarekodhi edhijitari mune dzimwe nyika, kusanganisira iyo US, kunoita kuti chiratidziro chinzvimbo chinoshanda. IatăKufamba kwekufamba kwakarumbidzwa semhinduro yeindasitiri asi kutora kwanga kuri kwehurombo, uye kwave nekushomeka kwekubatanidzwa kwehurumende. Iine vamwe vanopa vanopinda munzvimbo, yakagadzira nzira yakapatsanurwa inoda kuti vafambi vaise humbowo pachavo kuti vagadzire pasiti yedhijitari. Vafambi vanogona kukwira kuenda kunzvimbo nemitemo yakapusa kana kusarudza nzendo dzemudzimba zvichikonzera nzvimbo dzekushayikwa nevashanyi.
Vafambi vanoda mhinduro dzakareruka dzinoda kushingirira kushoma. Iyo indasitiri inofanirwa kushanda pamwechete kusanganisa mhinduro inoshanda kune vese vanoita zvemabhizimusi. Kusvika panguva iyoyo, vamwe vachanyara kubva pakufamba nekuda kwekuoma kwakaoma kwekuratidzira chimiro chekubaiwa.
Kunze kwekunge matanho akatorwa nekukurumidza, zvinogona kudzvinyirira kudiwa kwenyika dzese sezvo mitemo inogona kunge yakanyanya kunetsa kunzwisisa uye nzvimbo dzekudzoka dzinogona kumira semhedzisiro.